Side Grip - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Side Grip"
Zoma, 09 Novambra 2018 by Cristina Maria Sunea
Torolàlana amin'ny lafiny azo ovaina - azo ovaina na azo ovaina tanana
Rafitra hanitsiana ireo mpitari-dalana. Afaka mampihena be ny fotoana fanovana ny fizarana andalana! Fampivoarana samihafa azo alaina: mandeha ho azy (voafehy servo) - boky torolàlana miaraka amina handwheel - boky misy fika hafainganam-pandeha - manual tanteraka.
Published in Fihavanana
Ny mpitaona ny sisiny
Ity mpampita amin'ny sisin-tànana ity dia mitazona tavoahangy mivalona mandry, mamindra tavoahangy amin'ny conveyor iray mankany amin'ny iray hafa, misoroka ny tavoahangy voatosika,… Ho an'ny fizahana ifotony sns. Misy amin'ny halavany, hafainganam-pandeha ary rafitra fitondra fiara.